भारत नक्कली लुम्बिनी र अशोकस्तम्भ बनाउदैछ
फरिद जकारिया भन्छन्, बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् । भारतीय हुन् । उनको यो प्रचार अमेरिकाबाट गरिरहेका छन् । हामी हेरिरहेका छौं । हुन पनि लुम्बिनी पारी भारतले नक्कली लुम्बिनी निर्माणमा तीब्रता दिएको छ । छिटै भारतले विश्वलाई नया“ लुम्बिनी देखाइदिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक बौद्धमार्गीको मनमा बुद्धको जन्मस्थानबारे ठूलो अन्यौल सिर्जना हुनेछ । त्यतिबेला नेपालको लुम्बिनी बुद्धको जन्मथलो हो कि भारतको लुम्बिनी ? कुनचाहिं लुम्बिनी बुद्धको जन्मथलो हो भन्ने पनि द्विविधा हुनजानेछ । किनभने भारतले नक्कली लुम्बिनी निर्माणका साथै बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, बुद्ध धर्म भारतबाट सुरु भएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ । यो प्रचारलाई बुद्धको जन्मथलोको सरकार, पुरातत्व विभाग र विदहरु चुपचाप भारतले देखाएको यो नौटङ्कीलाई हेरिरहेका छन् । छिटै यो नौटङ्की नेपालको राष्ट्रिय समस्या बन्नेवाला छ । यसतिर नेपालको ध्यान गएको छैन ।
बुद्धका नाममा अनेक प्रकारका संघसंस्थाहरु कार्यरत छन् । त्रिविमा बुद्धबारे संकाय नै छ । लुम्बिनी विकास कोष र विश्वविद्यालय पनि खडा भइसकेको छ । तर भारतलको यो कुटिल मनसायप्रति यी कुनै पनि संघसंस्था निकायहरुले बौद्धिक प्रतिकार गरिरहेका छैनन् । यो मेरो काम हो र ? उसले प्रतिकार गर्छ नि भनेर सबै निकाय एकदोस्राप्रति जिम्मेवारी पन्छाइरहेका छन् । यसरी जिम्मेवारी पन्छाउ“दा पन्छाउ“दै अबेर भइसकेपछि के गर्ने ? बौद्धमार्गीहरुले पनि यसबारे चासो राख्ने बेला भइसकेको छ ।
गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने विषय बुद्धिमागी कसैलाई पनि भ्रम छैन । तर भारत अझै बुद्धलाई भारतीय हुन् भनिरहेको छ र भ्रम छरेर बुद्धधर्ममा अन्योल उत्पादन गर्ने खेतीमा लागेको देखिदै छ । फरिद जकारियाको पुस्तक त्यही खेती गर्ने मकैको गेडा हो । भारतले उत्तरप्रदेशको अलिगढवामा नक्कली लुम्बिनी निर्माण गर्न थालेको छ । भारतको दावी छ– बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन्, त्यो लुम्बिनी भारतमा छ । अमेरिकामा बस्ने भारतीय बुद्धिजिवी फरिद जकारियाले थप पुष्टि गर्दै पुस्तक लेखेर प्रचार गरे– बुद्ध भारतीय हुन्, बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् ।
यसरी प्रचार गर्ने भारतले गौतम बुद्धको मावली देवदह, जन्मस्थल लुम्बिनी र दरवार तिलौराकोट उत्तरप्रदेशको अलिगडवामा बनाउँदै छ । बौद्धकालीन भग्नावशेषसमेत भारतले योजनागत रुपमा निर्माण गरिरहेको छ । भारतको आरोप छ, नेपालको लुम्बिनी नक्कली हो, भारतको सक्कली । नेपालले नक्कल गरेर के विकास ग¥यो त के फरक प¥यो ? यसरी भारतीय कूप्रचार जारी छ, नेपालका इतिहास, पुरातत्वविद र सरकार केही बोलिरहेको छैन ।
आजसम्मको उत्खनन् र पुरातात्विक प्रमाणहरुले देखाएको सत्य यही हो कि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् । लुम्बिनी बगैंचा नै उनको जन्मस्थान हो । विश्व जनमतले यही विश्वास गरिरहेको छ र प्रमाणहरुले पनि यही देखाइरहेको छ । विश्वभरिका बौद्धमार्गीहरुका लागि नेपाल बुद्धदर्शन र शान्तिको तीर्थस्थल बनिसकेको छ । तर भारत नेपालप्रति, बुद्धधर्मप्रति अतिक्रमण गरेर र नकारात्मक धारणा विकसित गरेर अन्याय गरिरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक र राज्यपक्ष यस्ता भ्रमहरुलाई चिर्न र प्रतिवादका लागि तैयार हुनुपर्छ । भारतले जुन समस्या निर्माण गरिरहेको छ, यो समस्या नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो । भारत रिसाउ“छ भनेर राजनीतिक नेताहरुले अनदेखा गर्न मिल्दैन, यस्ता समस्यामा उच्च मनोबलका साथ प्रतिवाद हुनुपर्छ । भारतले हरेक वर्षको डिसेम्बर २९–३१ तारिखका दिन बुद्ध जयन्ती मनाउने र बुद्ध भारतीय हुन् भन्दै जाने समस्या अव लुम्बिनी निर्माणपछि अरु बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले तत्कालै नेपालले यसबारे चासो लिएर भारतसमक्ष औपचारिक बिरोध गरिहाल्नुपर्छ । भारतको उद्देश्य के हो ? भनेर जान्नुपर्छ र नेपाल र भारतवीचको यो बाद प्रतिवादलाई विश्व बौद्ध समुदायवीचसम्म पु¥याउनु पर्छ । भारतका पुरातत्वविद नेपाल आउने, बुद्धकालिन सबै प्रकारका सरसामानका फोटो खिचेर लैजाने र त्यसको नक्कल गरेर निर्माण गर्नुले पनि भारतको नियतमा खोट देखिन्छ । अरु त अरु, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भसमेत भारतले निर्माण गर्ने योजना बनाइसकेको छ ।